Tababare Zidane Oo Tababarkii Shalay Ee Real Madrid Eden Hazard Ku Arkay Arrin Lama Filaan Ku Noqday Oo Uu Aad U Jeclaystay & Taageerayaasha Kooxda Oo Ay Farxad U Tahay - Gool24.Net
Tababare Zidane Oo Tababarkii Shalay Ee Real Madrid Eden Hazard Ku Arkay Arrin Lama Filaan Ku Noqday Oo Uu Aad U Jeclaystay & Taageerayaasha Kooxda Oo Ay Farxad U Tahay
Garabka kooxda Real Madrid ee Eden Hazard ayaa shalay dib loogu sawiray cawska xerada tababarka ee Valdebebas si lamid ah xiddigaha kooxdiisa isaga oo tababare Zinadine Zidane si gaar ah usoo jiitay.
Hazard ayay xiddigaha Real Madrid ee shalay tababarka kusoo noqday kala mid ahaayeen xiddigo badan oo waaweyn sida Sergio Ramos, Luka Modric iyo Gareth Bale.
Kaddib markii uu si lamid ah xiddigaha kooxdiisa Arbacadii dhawayd ugu laabtay xerada tababarka si marka hore looga qaado tijaabada xanuunka Korona, Hazard ayuu barxada laga galo xerada tababarka ku soo dhaweeyay tababare Zidane oo la dhacsan.
Sida uu sheegayo wargeyska AS ee Spain kasoo baxaa, waxa uu Zidane la dhacay ee uu Hazard ku arkay ayaa ahaa jidhkiisa iyo sida uu isku soo diyaariyay mudadii karantiinka guryaha loogu jiray.
29 sano jirkan ree Belgium ayaan wali si buuxda usoo muujin sababtii ay Real Madrid lacagta 88-ka Milyan ee Pound ah uga soo bixisay markii ay Chelsea kala soo wareegaysay ku dhawaad sanad kahor.
Waxa uu kusoo biiray Real Madrid isaga oo wakhtigaas qiranayay inuu naaxay oo uu cayil iyo baruur badan dareemayo balse tababar badan kaddib mudo 10 maalmood gudahood ah ayuu iskaga riday dhammaan miisaankii badnaa.
Intaa kaddib dhibaato kale oo uu Hazard la kulmay ayaa ahaa dhaawac canqawga ah oo gaadhay bishii March kaas oo shaki galiyay inuu xilli ciyaareedkan markale taam u noqon doono Real Madrid iyo waliba haddii uu tartankii Euro ee baaqday qayb ka noqon lahaa.
Laakiin kaddib hakinta kubadda cagta uu galiyay caabuqa Korona, dhaawacii gaadhay Hazard ayaa la micno ah inuusan wax kulamo ah seegin oo uu kusoo noqday wakhtigii saxda ahaa waxaana uu kamid yahay tiro ciyaaryahano ah oo ku faa’iday in ciyaaruhu mudo maqnaayeen.